Waa maxay sababta dheemanka wareegsan ee isla le'eg ay uga qaalisan yihiin dheeman qaabeynta guud?
Saaxiibo badan ayaa ogaan doona in dheemanku ku yimaadaan qaabab badan. Maaddaama dheemanta loo jaro noocyo kala duwan, waxay soo saari doonaan qaabab kala duwan. Kuwa ugu caansan waa wareega, iyo qaabab kale ayaa si wada jir ah loogu gudbiyaa qaabab qaas ah (dhagxan jilicsan) dheeman, sida wadnaha qaabeeya, dhicis ...
Naqshadeynta Dharka Dharka moodhalan iyo Hormarsan Sare, waxay kugu qaadataa daqiiqado
Wershadaha dahabka, marka loo eego qaabeynta, qurxinta, farshaxanka, sheyga, wax soo saarka iyo heerar kale, waxaa si caadi ah loogu qeybin karaa afar qaybood: dahabka dharka sare, dahabka qaaliga ah ee fudud, dharka qurxinta iyo dahabka farshaxanka. —Ayuu aad u yaqiin ...
Marka laga hadlayo qaabeynta, Pearl waligiis ma lumin!
Sanadihii la soo dhaafay, luulku waxay noqdeen kuwa aad u caan ah oo ay raadsadaan macaamiisha iyo naqshadeeyayaasha, fikradaha cusub ee cusub ayaa si joogto ah u soo baxa! Naqshadeeye: Dai Bojun "Pa ...